Ahoana ny fomba hanoratanao atiny izay hamaritan'ny mpitsidika ny sandanao | Martech Zone
Alahady, Martsa 3, 2013 Alahady, Martsa 3, 2013 Douglas Karr
Na manao ahoana ny vidiny, ny soatoavina dia voafaritry ny mpanjifa hatrany. Ary matetika, io sanda io dia hiankina amin'ny fampiasan'ny mpanjifa ny vokatrao sy serivisinao. Mpivarotra rindrambaiko na serivisy (SaaS) maro no mampiasa fivarotana miorina amin'ny sandany hamaritana ny vidiny. Izany hoe, raha tokony handoa ny tahan'ny isam-bolana fisaka na ny tahan'ny mifototra amin'ny fampiasana dia miasa miaraka amin'ny mpanjifa izy ireo mba hamaritana ny sanda azon'ny sehatra omena ary avy eo hiasa miverina amin'ny vidiny sahaza ho an'ny roa tonta.
Ity misy ohatra… marketing amin'ny mailaka. Afaka misoratra anarana amin'ny serivisy marketing mailaka iray aho $ 75 isam-bolana na mandeha amin'ny serivisy premier $ 500 isam-bolana. Raha tsy mampiroborobo ny mailaka aho ary ampiasao izany hanatsarana, hahazoana na hitazonana ny mpanjifa, $ 75 isam-bolana dia kely lanja ary mety be loatra vola lany. Raha nandeha niaraka tamin'ny serivisy $ 500 isam-bolana aho ary nanampy tamin'ny fampivoarana ny fandefasan-kafatra, nanampy ahy tamin'ny fampiharana fampielezan-kevitra ho an'ny fisondrotana, fahazoana ary fitazonana… Mety hahomby amin'ny fampiasako mailaka hitondrana vola aman'hetsiny. Sarobidy tokoa izany ary mendrika ny vola aloa.
Misy antony ny mpivarotra mampiasa isan-jato tamin'ny famelabelaran-kevitr'izy ireo hanome porofon'ny fitomboan'ny sanda ho an'ny vokatra sy serivisiny. Raha nifindra tamin'ny vokatrao aho dia afaka mamonjy ahy 25% amin'ny saram-pandoavako ohatra, izany dia midika hoe dolara an'arivony amin'ny orinasa. Fa raha mandoa vola an-tapitrisany dolara ny orinasanao, ny sandan'ny vokatra dia be lavitra noho ny ahy.
Matetika ny mpivarotra no manao ny tsy mety amin'ny famaritana a tokatrano miavaka izay mamaritra ny sanda ara-kevitra mifototra amin'ny hevitr'izy ireo. Izany dia mety hiteraka elanelana amin'ny fanantenana eo anelanelan'ny zavatra heverinao fa sandainao sy izay amaritan'ny mpanjifa ny soatoavinao. Ohatra iray: Miara-miasa amin'ny mpanjifa marobe izahay amin'ny Search Engine Optimization. Mpanjifa izay manana sehatra matanjaka, marketing marketing ary ny fizotran'ny fampandrosoana ary afaka mampihatra fanovana lehibe hamaly ny fitakian'ny motera fikarohana hahazoana lanja tsy mampino avy amin'ny serivisinay. Ireo mpanjifa izay tsy mihaino, tsy mampihatra ny fanovana, ary mihaika ny tolo-kevitray matetika mijaly ary tsy mahatsapa ny sanda feno azonay omena.
Rehefa manoratra ny atiny marketing ianao dia misy paikady izay hanampy:
Ampiasao ny isan-jato amin'ny fanambaranao momba ny sanda mba hahafahan'ny mpitsidika manao matematika ary manisa ny tahiry sy fanatsarana ny vola miditra aminy fa tsy ny mpanjifanao.
Omeo ny tranga azo ampiasaina, fandalinana tranga ary fomba fanao tsara indrindra izay manampy ny mpitsidika anao hamantatra ny lanjan'izy ireo amin'ny fikambanan'izy ireo.
Omeo atiny izay miresaka mivantana amin'ny indostria manokana, karazana orinasa ary mpihaino mba hahitan'ny mpitsidika anao fitoviana eo amin'ny atiny sy ny orinasany manokana.
Omeo fijoroana ho vavolombelona avy amin'ny mpanjifa marobe, ny lohateny sy ny toerana misy azy ao amin'ny orinasa, mba hahafahan'ireo mpanapa-kevitra mifanaraka amin'ireo lohateny sy toerana ireo hahafantatra azy ireo.
Ny olona sasany dia mino fa ny famarotana sy ny fivarotana miorina amin'ny sandany dia mety hamitaka. Mino izy ireo fa ny tsirairay dia tokony handoa ny sarany mitovy. Tena mifamaly amin'ny mifanohitra amin'izay aho. Ireo orinasa manana vidiny mirary na manao ahoana na manao ahoana dia tsy mitaky ny mpanjifa sy ny fomba ahafahan'izy ireo mampiasa ireo vokatrao sy serivisinao. Mbola ratsy kokoa aza - mahatsiravina ny varotra manome antoka ny fitsidihana, ny laharana, ny fidiram-bola sns. Izy ireo dia fampidirana vola mialoha ary fampidina vola mba handanianao ny volanao ary hiala rehefa tsy azonao ny valiny nampanantenainy. Aleoko miara-miasa amin'ny mpivarotra mihaino ahy, mahatakatra ny enti-manana, mahafantatra ny zavatra ilaiko, ary miasa mba hanomezana vidiny izay sady nahafeno ny teti-bolako no nanome ny sanda nilaiko.
Tags: sarobidysanda kevitrafivarotana sandafivarotana miorina amin'ny sandany
Manakatona ny banga eo anelanelan'ny varotra sy ny marketing